Ihicha ụlọ - JUAN JUAN
akọrọ hichapụ (tragaasi)
75% Mmanya Na-ehicha
Microfiber akwa nhicha
N'ime afọ 10, Juan Juan bụ onye mmekọ ọ bụla maka ụdị nhichapụ ụlọ na-ehicha, na-egbu egbu ma na-egbu nje na ọtụtụ nde ụlọ.
Ndi isi ama ama anyi nwere amara ma nwekwaa oru nke ulo ka enyere ndi mmadu aka ihicha ma lekọta ulo ha anya. Ozugbo a na-eji nhichapụ ngwa ngwa na-adịkarị kwa izu mgbe a na-eji nhichapụ ụlọ kwa ụbọchị. Dị ka ngwaahịa na-eduga n'ahịa, Ezinaụlọ na-ehichapụ ọtụtụ ihe na-esi isi na isi ísì ụtọ bụ echiche ọhụrụ na akara aka.
Juan Juan Ezinaụlọ na-ehichapụ ụdị ngwaahịa gụnyere
Multi-elu na-ehichapụ iji kwado ma mmasị nke nje na-enweghị nje.
Kitchen na ime ụlọ ịwụ ahụ gụnyere nhicha mposi na-ehicha
Wilọ na-ehichapụ maka nhicha dị irè nke ihe niile siri ike.
Glass na-ehichapụ maka kristal doro anya na nkwụsị n'efu
Osisi na laminate na-ehichapụ iji wepu unyi, uzuzu na uzuzu ebe ha na -emezi ya ma na-eme ka ọ dị ọhụrụ
Igwe anaghị agba nchara hichapụ ịnapụta a iteto free enwu.
Iji jide n'aka kacha mma nke ụlọ ehichapụ
Usoro ndị a kwesịrị ịdị mkpa:
IACelli ika na-abụghị kpara akwa igwe na-eji na-eme ka ákwà otú ahụ elu bụ ọbụna na-eji ire ụtọ. Spunbond, spunlace, airlaid na-abụghị kpara akwa ga-abụkarị nhọrọ maka akwa. Otkpụrụ Dot, Embossed, Kwụ Ọtọ, Cross, Mesh, EF Texture ga-ahọrọ dị ka ụdị dị iche iche nke akwa a kpara akpa eji eji mmiri ehichapụ gụnyere ihichapụ ụmụaka, ihichapụ ịchọ mma, mmanya mmanya, disinfecting wipes, nhichapụ ụlọ, wdg.
II Usoro a ga - eji kpochapu ahihia ga - ewe oge ma jiri nlezianya mee ya. Oge a na-enyefe ya maka nhichapụ na-azaghachi ụdị usoro dị iche iche iji dozie mma n'agbanyeghị oke na ogo nke mma. Maka akpa mmiri na-ehichapụ mmepụta.
A jide n'aka na apịaji na-ehichapụ ehichapụ kwesịrị ịbụ, ịgbanwe ọ bụla akara nke ákwà n'ụzọ kwụ ọtọ bụ ihe dị mkpa.
b.Mainly anya nke ehichapụkwa akara ka efere nke centerline na njikọ nke ákwà n'etiti onye ọ bụla na-apụta ghara clogged.
c.Soft mbukota nke ehichapụ kwesịrị evenly ekenyela abụọ n'akụkụ.
d.The mkpuchi na ihennyapade ga-lorịị sticked ka obere akpa-ehichapụ.
e.The iche n'etiti China igwe na Germany igwe bụ izi ezi nke apịaji efere.
III.75% Mmanya na-egbu egbu / disinfecting usoro na mmiri dị ọcha nke usoro ọgwụgwọ RO na-emeso kwesịrị ka ndị ọkachamara wee mee ya, na qty ga-ezuru oke iji hichapụ nhichapụ ahụ, ma ọ bụghị, nhichapụ ga-acha edo edo ma nje ga-esi na nsị ahụ pụta.
Mbukota free IV.BPA ga-adị mkpa maka nhichapụ ụmụaka eco-enyi na enyi, na ijide n'aka na edobe mmiri mmiri ahụ ogologo oge enwere ike na obere akpa na-ehichapụ a. a na-eji ihe nkiri aluminum mee ihe maka mbukota. b. usoro akara na mmepụta mmiri na-ehichapụ mmiri dị mkpa. (dịka ọmụmaatụ: akara atọ ma ọ bụ akàrà anọ n'akụkụ)
Iii. Gbaa mbọ hụ na ogo na ihichapụ mmiri dị mkpa, mana arụpụtaghị ihe dịkwa mkpa
Ego ole ka anyị kwesịrị ịkwadebe iji mee otu nde mpempe mmiri mmiri?
1000 m3 kwesịrị ịkwadebe ịchekwa akụrụngwa (gụnyere mpịakọta akwa akwa na igbe katọn, usoro / mmanya, wdg) yana 1200 m3 kwesịrị ịkwadebe ịchekwa mkpocha mmiri nke dị njikere ibu na arịa.
Ihe ndị a bụ nkọwapụta nke ụdị ọ bụla
100 Cts a Mkpọchi
160 Cts a Mkpọsa
Ileba Pack 12 12
Mpempe akwụkwọ 15x 16 6 "x6.4"
Ileba Ibu 4.38kgs 9.636lbs
Ileba Dimensions 36x47x18cm 14.4 "x18.8" x7.2 "
UNIT Ibu ibu 0.368kgs 0.81lbs
UNIT Akụkụ 11.4x11.4x15 4.56 "x4.56" x6 "
PALLET ternkpụrụ 5x12 5x12
MGBE / AKW PKWỌ AKW PKWỌ 60 60
PALLET Ibu 2360kgs 5192lbs
Ileba Ibu 11.5kgs 25.3bbs
Ileba Dimensions 40x50x22cm 16 "x20" x8.8 "
UNIT Akụkụ 20x20x12.4 8 "x8" x4.96 "
PALLET ternkpụrụ 5x11 5x11
MGBE / AKW PKWỌ AKW PKWỌ 55 55
PALLET Ibu 632.5kgs 1391.5lbs
10 Cts otu mkpọ
50 Cts otu mkpọ
80 Cts otu mkpọ
Ileba Pack 180 180
Mpempe akwụkwọ 15x 20 6 "x8"
Ileba Ibu 11.3kgs 24.86lbs
Ileba Dimensions 52x28x17cm 20.8 "x11.2" x6.8 "
UNIT Ibu ibu 0.1kgs 0.22kgs
UNIT Akụkụ 20x10x1.5cm 8 "x4" x0.6 "
Ileba Pack 40 40
Ileba Ibu 13kgs 28.6lbs
Ileba Dimensions 53x34x17cm 21.2 "x13.6" x6.8 "
UNIT Ibu ibu 0.3kgs 0.66lbs
UNIT Akụkụ 20x10x3.5cm 8 "x4" x1.4 "
Ileba Pack 24 24
Ileba Ibu 16kgs 35.2lbs
Ileba Dimensions 43x34x25cm 17.2 "x13.6" x10 "
UNIT Ibu ibu 0.49kgs 1.078lbs
UNIT Akụkụ 20x10x4.5cm 8 "x4" 1.8 "
50 Cts mpịakọta
Ileba Pack 96 96
Ileba Ibu 11kgs 22b
Ileba Dimensions 66x44x51cm 26.4 "x17.6" x20.4 "
UNIT Ibu ibu 0.1kgs 0.22lbs
UNIT Akụkụ 20x10x5.5cm 8 "x4" 2.2 "
Ajụjụ maka disinfecting na-ehichapụ:
1.MOQ maka iji nhicha ahụ, ihichapụ mmiri, kpochapu mmiri, wdg.
Enweghị arịrịọ MOQ, mana 40HQ ga-abụ akụ na ụba kacha mma iji chekwaa ego nke njem.
2.Can anyị na-azụta naanị nhichapụ na mkpochi na-enweghị akara nzuzo?
Chọpụta, ịzụta akọrọ hichapụ na tragaasi wee jupụta mmiri mmiri na ebe a ga-azọpụta ego nke njem na ụtụ isi nke mbubata, wdg
3.Whether canister nwere ike ngwaahia?
Chọpụta, ahaziri tragaasi na-anabata, ma na-eri nke ịkpụzi kwesịrị-atụle
4.Whether ndị na-abụghị kpara akwa nwere ike ahaziri
Chọpụta, ma qty nke ákwà nke iwu kwesịrị iru 150T, ma ọ bụ ụgwọ nke ịkpụzi kwesịrị ịkwụ ụgwọ.
5.What bụ flushable akwa?
Nọmalị osisi pulp ákwà + Viscose na achara pulp + Viscose, anyị na-akpọ flushable ákwà
6.What bụ ere ere ákwà?
Nọmalị 100% Viscose, anyị na-akpọ biodegrable akwa
7.Gini ka mmadu ji were owu na ahihia mee?
Mmadu mere owu anyi ji Rayon ma obu Viscose, ma owu achara bu ahihia sitere na osisi.
8.Why otu compostion nke akụrụngwa nke na-abụghị kpara akwa, ma aka na mmetụta dị iche
Rụtụ aka na akụkọ nyocha nke akwa, ike ịmị / ike / elongation dị iche iche, na eriri ES kwesịrị ịchịkwa nke ọma, dabere na eziokwu, ọkwa dị elu nke igwe ga-akọwa ogo akwa ahụ.
9.Gịnị mere ị ga - eji hichapụ oge ụfọdụ anaghị adị mma?
a.Qualtiy nke akwa adịghị mma (na-ezo aka no.8) b. oke na ogo nke mma adịghị mma na igwe na-ehichapụ igwe.
10 Gini bu ihe eji eme ogwu?
Mkpọchi mee nke HDPE site igbu ịkpụzi, mkpuchi ka nke eyi site na ịkpụzi ịkpụzi.
11.Olee otu ngwugwu / ite ndi ozo nwere ike tinye n'ime 40HQ?
A ga-agbakọ qty ahụ dabere na ụzọ dị iche iche nke mbukota (dịka ọmụmaatụ, 12 canister / ctn or 24 canister / ctn)
Nke gara aga: Microfiber akwa nhicha
Osote: Ihe eji achọ mma
Adress: Nke20 ZhaoYu Road, FuWan Industrial Center, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China